Blog-Tipping: Netglobalbooks Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 19, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဘလော့ဂ်တင်ရန်စာရင်းတွင် Linda Lee နှင့် Netglobalbooks blog တို့ဖြစ်သည်။ Linda သည်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကလေးသုံးယောက်ပါသည့်ကြင်ဖော်မဲ့မိခင်ဖြစ်သည်။ Linda သည် eBay တွင်စာအုပ်များ၊ ကစားစရာများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်များကိုစတင်ရောင်းချခြင်းကြောင့် ebooks များရေးသားခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖန်တီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
သင်၏ Blog Tips, Linda:
မင်းရဲ့ version ကိုအဆင့်မြှင့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ် WordPress ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဗားရှင်း.
ငါသည်သင်တို့၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲထူးဆန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်၏အဓိကအညွှန်းစာမျက်နှာတွင်သင်၏စာသည်> p /> မှစတင်သည်။ စာမူတစ်ခုစီ၏အကြောင်းအရာအပြီးတွင်၎င်းတို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲပေါ်လာသည့်လူဆိုးစာလုံးများအချို့ပေါ်လာသည်။
သင်၏ပင်မစာမျက်နှာစာမျက်နှာကို WordPress ဆောင်ပုဒ်အယ်ဒီတာတွင်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်လူဆိုးစာလုံးကိုရှာနိုင်သည်။ funky p tag သည်သင်၏ပါဝင်မှုထဲတွင်ရှိနိုင်သည်။
သင်၏ sidebar ရှိသင်၏ဘလော့ဂ်တွင်ရှိသောဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရှိနေပြီ။ WordPress တွင်အလုပ်လုပ်သောဖိုရမ်တစ်ခုကိုသင်လိုချင်လျှင်ကြိုးစားနိုင်သည် bbPress။ ကျနော့် blogging သူငယ်ချင်း Tony Chung ကသူ့ site မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပြီ။ ekရာဝတီ.
သင်ရေးသားသည့်အခါစာပိုဒ်စာပိုဒ်များ (> p>) နှင့် line break များ (> br />) အရောအနှောများရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်။ line break သည် line ကိုချိုးဖျက်ပြီး padding (သို့) margin မပါ ၀ င်ဘဲနောက်တစ်ခုသို့ဆက်သွားမည်။ စာပိုဒ်တစ်ခု၊ ဒါပေမယ့်၊ သင့်ရဲ့စာပိုဒ်ရဲ့အပေါ်အောက်နဲ့အောက်မှာကောင်းတဲ့ padding အနည်းငယ်ကျန်ရှိနေတယ်။ စာပိုဒ်များသည်အကြောင်းအရာများကိုကောင်းမွန်စွာကွဲစေသည် - သင်၏အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ငါလိုင်းအားလပ်ချိန်ကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ header မှာ meta data tag များမရှိပါ။ meta data များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်သင်၏စာမျက်နှာတခုစီ၏အကြောင်းအရာများနှင့်ဖေါ်ပြချက်အချက်အလက်များကိုပြသရန်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ သင်၏သော့ချက်စာလုံးများနှင့် meta tags များကိုဖော်ပြရာတွင်သင့်အားကူညီရန် plugins အချို့ကိုတင်ပါ!
သင်၏ RSS feed အိုင်ကွန်ကိုနေရာချထားသည်။ သင်၏ RSS feed ဖြင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကိုသင်ဆွဲဆောင်ရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်သည်စာရင်းသွင်းရန်အကြံပြုလိုပါသည် Feedpress ပါ နှင့် Feedburner WordPress plugin ကိုဖွင့်ပါ။
သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်သည်တင်ရန်အကြံပေးလိုပါသည် Sitemap မီးစက်ပလပ်အင်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတကယ်တော့ beta version ပါ။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျွန်တော်မှာပြproblemနာမရှိဘူး။ သင်၏ဘလော့ဂ်သည် subdirectory ထဲတွင်ရှိသောကြောင့်သင်သည်သင်၏ sitemap ကိုတည်ဆောက်သောအခါ robots.txt ဖိုင်ကို၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
သငျသညျဒုက္ခသို့ပြေးလျှင်, နှင့်အတူ sign up ကို Google Search ကို Console အကြံဥာဏ်တချို့ရဖို့!
Linda Lee ကဘယ်သူလဲ ပုံဘယ်မှာလဲ။ ပုံဘယ်မှာလဲ။ Blogging သည်စာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ လူတွေကစာသားမဟုတ်ဘဲလူတွေနဲ့ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းစီးမှာပုံမရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ငါ့မှာအဲဒီမှာရှိတယ်။ ငါ့မျက်နှာကိုမှတ်မိနိုင်ပြီးငါ့ကိုနည်းနည်းပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ်။
သင်၏ဘလော့ဂ်များကိုအခြားဘလော့များနှင့်ကွဲပြားစေရန်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန်သင်၏ပို့စ်များကို clipart (သို့) ပုံများဖြင့်ဖြန်းပါလိမ့်မည်။ စာဖတ်သူများကပိုမိုလွယ်ကူစွာစကင်ဖတ်နိုင်စေရန်သင်၏အကြောင်းအရာအတွင်းကျည်ဆံနှင့်ခေါင်းစီးများ (h2, h3) ကိုအသုံးချပါ။
Linda, မင်းကဒီလိုငယ်ရွယ်တဲ့ဘလော့ဂ်နဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုတွေအားလုံးကိုတစ်ညလုံးသင်မလိုအပ်ဘဲအချိန်ယူပါ။ သင်၏ရေးသားမှုကိုသင်နှစ်သက်နေပုံရသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီအပြောင်းအလဲတချို့ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပါ။ စာဖတ်သူကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရှာဖွေနိုင်မှာပါ။
မင်းရဲ့ Blog ကိုလိုချင်ရင် စကားပြောရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျ၏လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာပါ Blog တင်ရန်.
Tags: Blog တင်ရန်Blog အကြံပေးချက်များLindanetblobalbooks များ
ဘလော့ဂ်တင်ဆက်မှုနောက်ဆက်တွဲ - Shonnie Lavender မှကျွန်ုပ်၏ Blog Coach
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 35
wow doug၊ ကျွန်တော် အဲဒီ sitemap generator plugin ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အရမ်းကောင်းတယ်၊ sitemap ကို google ကို ပို့ပြီးပြီ၊ မင်းရဲ့ အကြံဉာဏ်တွေအတွက် ကျေးဇူးပဲ ထပ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်နေပုံပေါ်ပါတယ်... အဆုံးထိ ဖတ်ပြီးရင် ပင်မစာမျက်နှာကို အပြောင်းအလဲတချို့ လုပ်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်အကြံပေးချက်များ၊ ငါပိုကောင်းလာမယ်ထင်တယ်။
19:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 16
bbpress ကျောက်များ Doug ဖော်ပြခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
20:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 00
အကူအညီနှင့် လင့်ခ်များနှင့် အကြံပြုချက်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဒီနေ့ အဲဒီထဲက တချို့မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ကျွန်တော့်အကြောင်း စာမျက်နှာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
မင်းအကြံပေးထားတဲ့ ပလပ်အင်တွေကို ငါထည့်သွင်းပြီး မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ငါလုပ်ခဲ့တယ်။
မင်းက အခု ငါ့ဘလော့ဂ်မှာ ရှိနေတယ်။
အရာအားလုံးအတွက် ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
21:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 09
Linda ကို အရမ်းကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို blogroll မှာ ထည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် - အဲဒါ တော်တော် ချီးကျူးစရာပဲ!!!
26:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 46
မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ပဲ ဝယ်လိုက်တယ်။
ဒီလူအကြောင်း တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘဲ Amazon ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ဖတ်ပြီး ဒါက ငါ့စာအုပ်အမျိုးအစားပါ။ "မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကို မျှော်လင့်ပါ"
(ကျွန်တော် eBay ကိုသွားပြီး ဝယ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်) ဒါပေမယ့် Amazon ကတစ်ဆင့် ရောင်းဖို့အတွက်လည်း ကျွန်တော့် website မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
28:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 55 မှာ
ရော်ဂျာက သူ့မှာရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်လွန်း! သူက တကယ်ကို ဖျော်ဖြေရေးသမားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို ကြိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်ကို အသိပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။